Shirweynaha qiimeynta khataraha lacag-dhaqidda oo ka furmay Mu... | Universal Somali TV
Shirweynaha ayaa lagu soo bandhigay warbixin cilmi-baariseed oo dhaqaalaha dalka ay ka soo diyaarisay Xarunta NRA, sida uu sheegay Ra'iisal Wasaare Kuxigeenka.
"Warbixintan ay soo diyaarisay Xarunta NRA waxa ay diiradda saartay guud ahaan dhaqaalaha dalka, gaar ahaan ka hortagga Lacag-dhaqidda & La-dagaalanka Maalgelinta Argagixisada." Ayuu yiri Ra'iisal Wasaare Kuxigeenka.
Wasiir Beyle ayaa Ra'iisal Wasaare Kuxigeenka iyo xubnihii kale ee shirweyka ka qaybgalay uga mahadceliyay ka soo qaybgalkooda.
Kan-xigaMadaxweyne Guudlaawe oo la kulmay Wak...
Kan-horeMaxkamadda Ciidamada oo dil ku xukunt...
59,515,345 unique visits